ငါဟာစွဲလမ်းနေတဲ့ Worldwide Church of God Switzerland ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားပါ
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-03 > ငါစှဲလမျးသူပေါ့
ငါစွဲလမ်းတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံရန်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလိမ်ခဲ့သည်။ ကိုကင်း၊ ဘိန်းဖြူ၊ ဆေးခြောက်၊ ဆေးရွက်ကြီး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများစသည့်အရာအမျိုးမျိုးကိုစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းသူများစွာနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, တစ်နေ့မှာတော့ငါအမှန်တရားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါစွဲလမ်းနေတယ် ကျွန်တော်အကူအညီလိုအပ်တယ်!
စွဲလမ်းမှု၏ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သောလူအားလုံးအတွက်အမြဲတမ်းတူညီကြသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ဘဝအခြေအနေသည်ယိုယွင်းလာသည်။ စွဲသူများ၏ဆက်ဆံရေးလုံးဝပျက်စီးခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူများသို့မဟုတ်အရက်၏ပေးသွင်းသူများသာသင်သူတို့ကိုခေါ်နိုင်ပါကစွဲလမ်းသူများအတွက်ကျန်သောသူငယ်ချင်းများသာကျန်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခိုရောင်းဝယ်သူများသည်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း၊ ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့်အခြားတရားမ ၀ င်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများသည်လုံးဝကျွန်ဘဝရောက်နေရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Thandeka (အမည်ပြောင်းလိုက်သည်) သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအသက်တာမှသူမကိုကယ်တင်သည့်တိုင်အောင်သူ၏ pimp မှအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်သူမကိုယ်သူမပြည့်တန်ဆာလုပ်ခဲ့သည်။ စှဲလမျးသူ၏အတွေးကိုလည်းထိခိုက်သည်။ အချို့သည်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်း၊ မမြင်ရသောအရာများကိုမြင်တွေ့ကြားရသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးဘဝသည်သူတို့အတွက်အရေးပါသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကသူတို့မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်းကိုယုံကြည်လာကြပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကကောင်းတယ်၊ လူတိုင်းကိုပျော်မွေ့နိုင်အောင်တရားဝင်ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘာသာယုံကြည်လာကြပြီ။
မူးယစ်ဆေးဝါးမှထွက်ခွာသွားသူကိုကျွန်ုပ်သိတဲ့သူအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ခက်ခဲမှုနဲ့မှီခိုအားထားမှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့ကိုသနားပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးတွင်းထဲကထုတ်ယူပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာကိုသွားမယ့်သူကိုရှာပါ။ စွဲလမ်းသူများအတွက်ဆေးရုံဖွင့်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာစွဲစွဲလမ်းသူများဖြစ်ကြသည်။ ၁၀ နှစ်ကြာလျှင်မူးယစ်ဆေးမရှိဘဲနေ့တိုင်းသန့်ရှင်းနေရန်ရုန်းကန်နေရကြောင်းသင်ပထမဆုံး ၀ န်ခံလိမ့်မည်။
ငါ့စွဲလမ်းငါ့ဘိုးဘေးတို့နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့အားပညာရှိစေမည့်အပင်တစ်ပင်ကိုစားရန်ပြောခဲ့သည်။ မဟုတ်ပါ၊ ဤစက်ရုံသည်ဆေးခြောက်မဟုတ်သကဲ့သို့ကိုကင်းမှပြုလုပ်ထားသောကိုကာကိုလာလည်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူမအတွက်အလားတူအကျိုးဆက်များရှိခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏ဖခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးမှပြုတ်ကျပြီးမုသားယုံကြည်သည်။ ဒီအပင်ကိုစားပြီးတဲ့နောက်သူတို့ရဲ့အလောင်းတွေကိုစွဲလမ်းလာတယ်။ ငါသူတို့ထံမှစွဲအမွေဆက်ခံ။
ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်မည်သို့သိရှိကြောင်းပြောပြပါရစေ။ ကျွန်တော့်အစ်ကိုတမန်တော်ပေါလုဟာသူစွဲလမ်းနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီးနောက်မှာသူကညီအစ်ကိုတွေကိုစာတွေစရေးပြီးစွဲလမ်းမှုအကြောင်းသတိပေးတယ်။ အရက်စွဲသူများအားအရက်သမားများ၊ အခြားသူများကိုအမှိုက်သရိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုရှိသူများကိုအပြစ်သားများဟုခေါ်သည်။
«Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn! So diene ich nun mit dem Verstand dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde» (Römer 7,23-25) ။
ဆေးခြောက်၊ ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူကဲ့သို့ဤအပြစ်ရှိမူးယစ်ဆေးစွဲသည်။ မင်းကအရက်သမားတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့ဟာလုံးဝစွဲလမ်းပြီးကျွန်ခံနေတယ်ဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်။ မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူး ဘယ်သူမှသူတို့ကိုအကူအညီမပေးရင်သူတို့အကူအညီလိုတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကနေပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအပြစ်စွဲသူများအားသခင်ယေရှုကအကူအညီတောင်းသောအခါအချို့က၎င်းတို့သည်မည်သည့်အရာနှင့်မျှမတို့၏ကျွန်မဟုတ်ဟုထင်ကြသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်အပြစ်စွဲနေကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။ ငါဟာအပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ခဲ့တယ် ငါပေါလုလိုပဲငါလည်းအကူအညီလိုတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသမားအချို့သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ငါလာတဲ့အခါအပြစ်တရားဘ ၀ ကိုစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနေသူတွေရဲ့အားပေးမှုကိုခံရမယ်လို့သူတို့ကပြောတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာသူတို့အစည်းအဝေးတွေစတက်ခဲ့တယ်။ မလွယ်ဘူး ကျွန်ုပ်သည်အခါအားလျော်စွာအပြစ်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းသခင်ယေရှုကသူ၏အသက်တာကိုအာရုံစိုက်ရန်ပြောခဲ့သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များသောအသက်ကိုယူပြီးသူ့ဘာသာသူလုပ်ခဲ့ပြီးသူ၏အပြစ်ကင်းသောအသက်ကိုပေးသည်။
ငါသည်ဤစွဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျှော်လင့်ချက်မရှိကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ ဘဝအသစ်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ် ကျွန်ုပ်သည်ကားတိုင်ပေါ်တွင်ယေရှုခရစ်နှင့်အတူသေဆုံးခဲ့ပြီးသန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၌အသစ်သောအသက်တာသို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌သူနှင့်အတူထမြောက်ခဲ့ပြီးအသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်အားအပြစ်တရား၏ကျွန်အဖြစ်မခံတော့မည့်ခန္ဓာကိုယ်အသစ်ကိုပေးလိမ့်မည်။ သူသည်တစ်သက်လုံးအပြစ်မဲ့စွာနေထိုင်ခဲ့သည်။
Sie sehen die Wahrheit, Jesus hat Sie bereits befreit. Die Erkenntnis der Wahrheit befreit. «Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen" (Johannes 8,32). Jesus ist die Wahrheit und das Leben! Sie müssen nichts tun, damit Jesus Ihnen helfen kann. Tatsächlich starb er für mich, als ich noch ein Sünder war. "Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen» (Epheser 2,8-10) ။
သငျသညျတစ် ဦး စွဲ, တနည်းအပြစ်တရားအားဖြင့်သင်တို့ကိုထိခိုက်လျှင်, သင်စွဲပြproblemsနာများနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲဘုရားသခင်သည်သင်အလွန်ချစ်သောသူကိုသင်အသိအမှတ်ပြုရန်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ပထမခြေလှမ်းမှာသင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ထားသောဘုရားသခင်နှင့်ကင်းကွာ။ ယေရှုခရစ်ကိုလုံးလုံးမှီခိုရန်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်သင်၏အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်းနှင့်သင်၏အားနည်းချက်များကိုအစားထိုးအဖြစ်သင်ဖြည့်စွက်ပေးခဲ့သည်။ သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၎င်းကိုသူနှင့်ပြည့်စေပါသည်။ သခင်ယေရှုအပေါ်လုံးလုံးမှီခိုခြင်းကသင့်အားအခြားအရာအားလုံးနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်စေပါ။